© Donation to Khirmaya Saru
Help for Khirmaya Saru
Click here to listen Khirmaya News in MP3
आदणिर्य सहयोगदाता ज्यू,
सहयोगको लागि धन्यवाद । आज १८ जुलाई ०९ देखि हामीले सहयोग रासी उठाउने कार्यलाई समाप्त गरेका छौ । सहयोग दिनु भएको तर यस पेजमा उल्लेख गर्न छुटेको भएमा हामीलाई तुरुन्त भन्नुहुन अनुरोध गर्दछौ ।
हाम्रा एकजना सदस्य उत्तम राइ अहिले काठमाण्डौ पुगि सक्नु भएको छ । वहा केही महिना काठमाण्डौ रहनु हुनेछ र त्यसै समयमा उक्त उपचार गरिने योजना रहेको छ । अपटुडेटको लागि यो पेजलाई हेर्दै गर्नुहोला । पुन सदभाव र सहयोगको लागि धन्यवाद ।
यहाहरुको सदभाव र सहयोगले हामीले हाम्रो लक्ष्य अनुसार सहयोग रकम संकलन गर्न सफल भएका छौ । हामी अब चाडै सहयोग रकम उठाउनेक्रम बन्द गर्दैछौ । हाम्रा टिमका कम्तिमा एक सदस्य प्रत्येक्ष नेपाल गएर औषधि उपचार गराइनेछ । के कति प्रगतिहरु हुन्छन हामी यहि पेजमा अपटुडेट गरिने छ । कृपया हेर्दै गर्नुहोला ।
बिपत्तिकी खिरमायालाई सहयोग जुटाउदै
सहयोग गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद १ लाख पचास हजार जति संकलन गर्ने योजना अनुसार अलि अपुग भएकोले हामी अन्तिम पटक सहयोग उठाउदै छौ । यो पैसाले शिधै अस्पतालमा ल्याई उपचार गराइने छ । उपचारको लागि हाम्रै टिमका कुनै एक सदस्य नेपाल पुग्नु भएको वेला हुनेछ । हामी यो काम जतिसक्दो चाडो गर्ने कोशिसमा छौ । सबै जानकारी हामी यहि पेजमा अपटुडेट गर्नेछौ । जम्मा भएको पैसा भन्दा जिम्मेवारी ठूलो आएको महशुस गरेका छौ ।
विएफविएस गोर्खा रेडियोका धनकुटा संवाददाता नगेन्द्र राईले प्रत्येक्ष धनकुटाको त्रिशुलेमा पुगेर ३० बर्षिया खिर माया सारुमगरको अवस्था बर्णन गरेपछि। रेडियो सुनेर बसेकाहरु अत्यन्तै भावुक बने।
आज भन्दा ८ बर्षअघि खिरमाया मोरङबाट महिनाको ५ सय ज्याला लिने शर्तमा त्रिशुले आईपुगेको थिए। एकदिन जंगलमा घाँस काट्न जाँदा अचानक उनको आँखामा काँडाले घोच्यो र अस्पताल गई सामान्य उपचार पछि घर पर्किए। केही समय पछि पुनः जचाउन ल्याउनु भन्ने डाक्टरको सल्लाह अनुसार पैसा अभावको कारण सम्भव भएन। अन्तत उनको जवानीमै दुवै आँखा बन्द सरह भएका छन्। उनको काखमा ५ बर्षे छोरो छ तर उनको कुनै घरछैन, जग्गा छैन र उनलाई लोग्नेले पनि केही बर्ष अघिनै छोडि सकेको छ।
त्रिशुलेको अत्यन्तै जाडोमा भोकभोकै बस्नु बाध्य खिरमायाको विकल्प बाटोमा मागि खानु नै हो। साइत परेको दिन बाटा हिड्नेले केही दिन्छन र उनको पेट अनि सानो छोरोको पेट उक्सन्छ नत्र सधै भोकै हुने गर्छ। खिरमाया डाक्टर कहाँ जान सकेमा उनको आँखाले काम गर्न सक्ने बताईएको छ र त्यसको लागि डेढ लाख रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको समाचार सुनेपछि। वेलायतको सर्नकिल्फमा रहेका ब्रिटिस गोर्खा सैनिक दाजुभाईहरुको एक समुह खुलेरै सहयोग जुटाउन लागेका छन्। उक्त समुहमा दिलिप लिम्बू धनकुटा, सल गुरुङ संखुवासभा, उत्तम राई गाइघाट, उदयपुर्, सन्तोष मगर सोलुखुम्बु, सोलमान रानामगर बाग्लुङ र विश्वास दीप तिगेला धनकुटा रहेका छन्।
हाम्रो एकदुई पाउण्डको सहयोगबाट खिरमायाले उनको आधा भन्दा बढि जिबन आँखा हेरर जिउन सक्दछ भने त्यो नै हाम्रो धर्म हुने कुरा उल्लेख गर्दै सबैलाई यथासम्भव आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। सहयोग स्वरुप संकलित रकम सहि तवरले सदुपयोग गरिने र सहयोग दाताहरुको नाम पत्रिका र वेभपेजमा प्रकाशित गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। इच्छुक ब्यक्तिले 07828155706 मा वा [email protected] मा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ।
सहयोगको लागि बैक विवरण:
सहयोग दाताहरुको नामावली र ठेगाना:
S/No Name Address in Nepal Current Address Amount Rmks
2 RGR Medical
Capt Ganga Malla
Bhairawa 3, Lumbeni
Chauki Vanjayang, Dhankuta
Hangpang -5, Taplejung
Capt Prem Gurung
Kalyan chok, Dharan
Sainike chok, Phokara
Sher J Thapa
Sher bahadur Tanghami
Bhojedra B. P
Nele bazar, Solukhumbu
Sakhejung -5Ilam
Dorpa- 1, Khotang
Nar Prasad Thamshuhang
Panchthar Yangnam 4
Woking, Ex 2GR
Mrs Pabitra Rai
Jhapa Damak 11
Mrs Susma Rai
Online Own Volunteer
Mr Kamal Pulami
Mr Dut Pun
Okhaladung & Sunsari
Mrs Biba tamang
Capt Bhaktabahadur Thapa
WO2 Ramkrishna Sunuwar
Gupteshar-2, Kholmetar Ramechhap
2RGR, Education Centre
On Hand B
312-283 Pharmacy Ave.Toronto Ontario M1L 3G1, Canada
P O Box 420011
151. Jor Rai 858 Blair Ave # C, Sunnyvale, CA 94087, USA $20 By Paypal
152. Bhaktabahadur Thapa London £20 Cheque
153. Rajesh Rai Jhapa/Kathmandu 2RGR, PT Wing £10 On hand B
154. Ramprasad Limbu Khotang 2RGR, Education £10 On hand B
155 Surendra Ingnam Iwa aathrai, Tehrathum 2RGR, MT
156 Suren Purja Pokhara2RGR £10
157 Kumar Rai Aakhisalla, Dhankuta2RGR £50
158 Subash Muktan Dhankuta2RGR £10
159 Krishna BK Bhojpur2RGR £5
160 Nagendra Grg Pokhara2RGR £5
161 Dik Limbu Dharan 112RGR £5
162 Lukesh shretha Lalitpure2RGR £2
163 Bhesh Rajali Gulmi2RGR £2
164 Prem bdr Rai Dharan2RGR £5
165 Manikmr Subba Taplejung2RGR £5
166 Ekraj Limbu Damak2RGR £5
167 Rabindra Rai Pathari 12RGR £10
168 Nagen Thebe Damak2RGR £1
169 Kushal Rai Dharan2RGR £10
170 Suraj Waling Jhapa2RGR £5
171 Hemanta Grg Pokhara2RGR £6
172 Dependra Thapa Pokhara2RGR £3
173 Yogendra Rai Morong2RGR £5
174 Dhanbdr Ghishing Kathamadu2RGR £5
175 Dipesh Grg Pokhara2RGR £5
176 Bhimbdr Grg Pokhara2RGR £5
177 Ratana bg Magar Rolpa2RGR £1
178 Gangabdr Magar Dhankuta2RGR £15
179 Anil Rai Sunsari2RGR £3
180 Uddar Grg Pokhara2RGR £3
181 Rocky Grg KTM2RGR £3
182 Bishal Grg Nawalparashi2RGR £5
183 Bipin Nembang Panchther2RGR £3
184 Narbdr Sunuwar Ramechhap2RGR £1.5
185 Nilkiran Rai Solu2RGR £2
186 Roshan Grg Pokhara2RGR £2
187 Nar Grg Pokhara2RGR £2
188 Depen Rai Illam2RGR £11
189 Gaj bdr Grg Pokhara2RGR £5
190 Ambika Limbu Dharan2RGR £5
191 Hari bdr Thapa Syanja2RGR £2
192 Promod Sherchan Pokhara2RGR £5
193 Anan Rai Jhapa2RGR £3
194 Devkmr Limbu Dharan2RGR £5
195 Nabin Rai Morang2RGR £5
196 Dhailendra KC Butawal2RGR £10
197 Dependra Tamang 2RGR, B Coy £3 Dilip
198 Nuru Sherpa 2RGR, B Coy £2
199 PuspaRaj Thapa 2RGR, B Coy £2
200 Sumon Limbu 2RGR, B Coy £2
201 Amrit Grg 2RGR, B Coy £2
202 Lobsang 2RGR, B Coy £3
203 Dependra Ghale 2RGR, B Coy £2
204 Awas Limbu 2RGR, B Coy £2
205 Dagen Rai 2RGR, B Coy £2
206 Tara Rana 2RGR, B Coy £2
207 Rabin Rai 2RGR, B Coy £2
208 Mahesh Grg 2RGR, B Coy £5
209 Jivan Rasaili 2RGR, B Coy £3
210 Binod Rai 2RGR, B Coy £
211 Sangam Rai 2RGR, B Coy £5
212 Gajendra Angdembe 2RGR, B Coy £5
213 Dablu Ghale 2RGR, A Coy £1
214 Sundar Grg 2RGR, A Coy £2
215 Sanjay Tamang 2RGR, A Coy £2
216 Harka Thebe 2RGR, A Coy £2
217 Prakhash Bhandari 2RGR, A Coy £2
218 Rudra Limbu 2RGR, A Coy £2
219 Puskal Rai 2RGR, A Coy £1
220 Bishnu Limbu 2RGR, A Coy £3
221 Roshan Grg 2RGR, A Coy £1
222 Bijay Rai 2RGR, A Coy £2
223 Nagendra Grg 2RGR, A Coy £1
224 Buckly 2RGR, A Coy £5
225 Wakil Rai 2RGR, A Coy £5
226 Ram Rai Illam 2RGR, A Coy £5
227 Dilli Ram Rai Solukhumbu 2RGR, Sp Coy £20
228 Chitra Bdr Rana Dang Newport, Wales £10
229 Dambar Bdr Sunwar Ramechap 2RGR, Mor Pl £5
230 Chok Bdr Grg Pokhara 2RGR, Mor Pl £5
231 Raju Grg Bhojpur 2RGR, Mor Pl £10
232 Sandip Limbu Tehrathum 2RGR, Mor Pl £5
233 Laxmi Jeemi Sankhuwasabha 2RGR, Mor Pl £5
Mitra Kmr Limbu
Jhapa 2RGR, Mor Pl £5
235 Netra Kmr Rai Bhojpur 2RGR, Mor Pl £5
236 Ravin Rai Bhojpur 2RGR, Mor Pl £5
237 Rupdue Rai Khotong 2RGR, Mor Pl £5
238 Bibek Grg Okhaldhunga 2RGR, Mor Pl £2
239 Dil Kmr Rai Udaypoor 2RGR, Mor Pl £5
240 Krisna Kmr Angdembe Jhapa 2RGR, Mor Pl £5
241 Raj Kmr Rai Jhapa 2RGR, Mor Pl £5
242 Jasta Raj Rai Okhaldhunga 2RGR, Mor Pl £5
243 Tek Bdr mabo Pachthar 2RGR, Jav Pl £5
244 Gokul Prasad Grg 2RGR, Jav Pl £10
245 Dhan Bdr Thadamagar Dhankuta 2RGR, Jav Pl £5
246 OM Bdr Roka 2RGR, Jav Pl £2
246 Subhachandar Rai Khotong 2RGR, Jav Pl £2
247 Kul Bdr Tumbapo Teplejung 2RGR, Jav Pl £2
248 Tarun kumar Sunwar Ramechap 2RGR, Jav Pl £2
249 Shree Prasad Jeemi 2RGR, Jav Pl £5
250 Hira singh Rai 2RGR, Jav Pl £3
251 Annanda Rai Bhojpur 2RGR, Jav Pl £2
252 Arjun shyu 2RGR, Jav Pl £2
253 Rambabu Rai Khotong 2RGR, Jav Pl £2
254 Govinda 2RGR, Jav Pl £2
255 Shirshir Rai 2RGR, Jav Pl £3
256 Dhiraj Rai 2RGR, Jav Pl £3
257 Kusum Rai Khotong 2RGR, Jav Pl £2
258 Dinesh Rai 2RGR, Jav Pl £3
259 Mansingh 2RGR, Jav Pl £2
260 SukBdr Rai 2RGR, Jav Pl £2
261 Debiprasad Nembang Taplejung 2RGR, Jav Pl £2
262 BalKumar Limbu Tehrathum 2RGR, Jav Pl £2
263 Nabin Rai 2RGR, Jav Pl £2
264 Som Bdr Magar 2RGR, Jav Pl £2
265 Bhoj Kmr 2RGR, Jav Pl £2
266 Dipendra 2RGR, Jav Pl £2
TOTAL= £1867 will confirm
नाम छुटेको वा सुधार्नु पर्ने भएमा तुरुन्त भन्नुहोला ।